MUUQAAL: War cusub oo kasoo baxay Xafiiska R/wasaare Khayre iyo Kulamadii uga socday Maraykanka | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
MUUQAAL: War cusub oo kasoo baxay Xafiiska R/wasaare Khayre iyo Kulamadii uga socday Maraykanka
Muqdisho ( Kalshaale ) Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre, mudadii uu joogay dalka Maraykanka waxa uu kulumo kala duwan la yeeshay dowladda Mareykanka, gaar ahaan Aqalka Cad, Wasaaradda Arrimaha Dibedda, Wasaaradda Gaashaandhigga, Wasaaradda Maaliyadda iyo USAID, waxayna isku afgarteen in la sii xoojiyo xiriirka iyo wadashaqaynta labada dal.
Dowladaha deynta ku leh Soomaaliya ayaa u riyaaqay in dowladda Soomaaliya muujisay in ay awood u leedahay in ay la jaanqaadi karto hannaanka dhaqaalaha caalamiga ah iyadoo laga tusaale qaadanayo guulaha laga gaadhay dib-u-habeynta nidaamka maaliyadda muddo gaaban gudaheed.
Lacagta la soo furidoono ee aduunku siindoono Somaliya,waa inay diidaan Reer Muqdisho.Waa inay yidhaahdaan – lacagta dadka Somaliyeed ha loo qaybiyo.
Reer Muqdisho eeyarbay iska dhuuqidoonaan lacaga soo socda.
Waan ogolahay ina cssimada lay noo hagaajiye la socda.
Ha la baxsanina lacagtaasi sida Dabagaalaha.